Banaanbax looga soo horjeedo Jubbaland oo ka socda Degmada Dhoobley * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Banaanbax looga soo horjeedo Jubbaland oo ka socda Degmada Dhoobley
By Ardaan Yare	 On Aug 25, 2018
Wararka ka imaanaya Degmada Dhoobley ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayan in halkaasi uu ka socdo banaanba xoogan oo dhigayaan boqolaal shacab.
Banaanbaxan oo dhigayaan boqolaalka shacabka ah ayaa isugu soo baxay gudaha degmada dhoobley waxa ayna ka soo horjeedaan maamulka Jubbaland.
Sidoo kale banaanbaxayaasha ayaa waxa ku qeylinayaan Erayo ka dhan ah maamulka Jubbaland,Erayadaasi oo ay ugu soo horjeedaan hab siyaasadeedka uu ku shaqeeyo Jubbaland.
Waxaa shalay banaanbax xoogan oo isna looga soo horjeedo maamulka Axmed Madoobe uu hogaamiyaha ka yahay uu ka dhacay Magaalada garbahaarey,kaasi oo ay dhigeen dadweyne badan oo isugu soo baxay gudaha Magaalada garbahaarey ee Gobolka Gedo.
Ciidamo gadoodsan oo la wareegay Bankiga dhexe ee Magaalada Gaalkacyo
Wararkii ugu dambeeyay dab xoogan oo ka kacay kaalin shidaal ku taalla Boosaaso